Etazonia: Bilaogy Handinihana Indray Ny Tontolo Hispanika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2011 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, polski, Español
Ao New York, ny tanàna tena Latino-Amerikana kokoa amin'ireo rehetra any Amerika, [es] araka ny fanambaran'i Claudio Iván Remeseira, dia tsapa ny firoborobon'ny kolotsaina sy zavakanto Espaniola“. Tafaresaka tamin'io mpanao gazety fanta-daza sy mpitsikera ara-kolotsaina io ny Global Voices tao amin'ny bilaoginy Tetikasa Hipanika ao New York: (Tetikasa Tontolo miteny Espaniola) taratra iray mampiseho ny tena fijery ankapobeny izay mampanan-karena an'i New York sy ny firenena.
Claudio Remeseira, talen' ny tetikasa Hispanika ao New York. Sary nalain'i Marcia V. Zorrilla
Global Voices: Folo taona monja (eo ho eo) taorian'ny nisian'ny bilaogy , hitantsika miha-matanjaka hatrany ny fahatongavany. Inona avy no azontsika omena ho nahatonga io firongatry ny bilaogy io amin'ny maha mpanoratra sy mpanao gazety matihanina anao?
Claudio Iván Remeseira (CR): Endrika fifandraisana mivantana mifanaraka amin'ny vaninandro misy antsika ny bilaogy. Anjato taonany izay, ireo mpanoratra, mpanao gazety ary mpanao pôlitika dia namoaka karazana gazety-boky sy valonan-taratasy, pejy roa na iray ihany, izay nahafahan'izy ireo misarika ny sain'ny mpamaky. Loharano lehibe niraisana io. Sahala amin'io karazana fanelanelanana io ny bilaogy ary mifototra amin'ny filàna maharitra ho an'ny fanehoan-kevitra.
GV: Ambonin'ny filomanosanao tanteraka ao anatin'ny bilaogy, manamarika ny fihetsiketsehana ataon'ireo Amerikana Latina ao an-tanànan'i New York ianao. Inona no tondrozotra ampiasainao mba hanairana izany fahasamihafana maro izany?
CR: Ny fomba fanontàna no fanalahidin'ny famoahana rehetra. Niavaka mihitsy ny nataonay: niezaka nandinika indray ny fomba fijery mibahan-toerana mahakasika ny tontolo miteny Espaniola ao New York; ary manambatra ny feo avy any Espana, Meksika ary Portugal ho ao anatin'ny tontolon'ny miteny Espaniola.
Indramiko ny famaritana ny hoe “Hispanika , na Tontolo miteny Espaniola” nampiasain'ny akademisiana Dominikana Pedro Henriquez Urena [es], nahazo fanasana tamin'ny Kaonferansa Charles Eliot Norton tany amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard, izay nanaovany lahateny mahakasika ny “ny literatiora ankehitriny any Amerika miteny Espaniola” ny 1940 ka hatramin'ny 1941. Araka ny voalazan'i Henríquez Ureña, “ny tontolo miteny Espaniola” dia avy amin'ny kolotsainan'ireo mponina tao amin'ny Sarinosy Iberian (ny Hispania an'ny Romans) nifangaro tamin'ny kolotsain'ireo Mpanjanaka taty aoriana sy ireo zanatany, (tsy fanomezan-kasina ny maha “Tompon-tany” azy ireo, izay noheverina fa mpifindra monina farany, avy any Azia ny ankamaroany ary ny sasany kosa avy any Oseania) izay antsointsika hoe Amerika latina amin'izao fotoana.
Ny manahirana dia ny tsy fahafahana manome ny vaovao marim-pototra misimisy kokoa. Izaho akory tsy miteny hoe mifaninana amin'ireo kaompania vaventy toy ny Univision na ny Fox New; nefa miezaka ny mampiditra lahatsoratra vaovao mahaliana 6 na 7 isan'andro aho. Mifantoka amin'ny vaovao momba ny vondrom-piarahamonina Latina ao Etazonia ny lohahevitra, ary ny politika iraisam-pirenena izay noraketin'ireo mpandala tantara Hispanika ao New York na any amin'ireo tanàn-dehibe hafa ao Etazonia. Namoaka koa aho ny lisitr'ireo karazana hetsika momba ny zavakanto, sary mihetsika, literatiora, ary tantara tsangana, toy ny Teatro Stage Festival, na fankalazana ny dingana ara-teatraly, ohatra, izay fiaraha-miasa eo amin'ny tetikasa Hispanika ao New york.
GV: Afaka mizara kely momba ny fifandraisana misy eo amin'ny akademia, indrindra indrindra fa ny Anjerimanontolo ao Columbia, sy ny bilaoginao momban'ny tetikasa Hipanika ao New York ve ianao?
CR: Fandavan-tena manokana ity bilaogy ity. Izaho irery ihany no tompon'andraikitrin'ny fanontàna sy fanoratra ny votoatin-kevitry ny lahatsoratra tsirairay. Ny tetikasa Hispanika ao New York, amin'ny lafiny iray, dia fepetra akademika ara-kolotoraly natsangan'ny foibem-pampianarana Amerikana, ary misy singa fototra telo lehibe amin'izany: fanabeazana (amin'ny alalan'ny fihaonam-be isan-taona ho an'ireo mpianatra manomana ny diplaoma ambony momba ny tantaran'ireo tanàna Latina) sy fikarohana; fandaharan'asa mahakasika ny literatiora sy hornantsary natodka mivantana amin'ny fiarahamonina; ary ny famokarana boky sy famoahana hafa: nampitondraina ny lohateny hoe “Hispanika ao New York: boky loharano” ny valin'ny ezaka fanontàna voalohany ( Gazetin'ny Anjerimanontolon'i Columbia, 2011), izay izaho no tompon'andraikitra amin'n fanontàna azy. Nanolotra toro-hevitra maimaim-poana ho an'ireo mpanoratra, mpanao gazety ary akademisiana mpikaroka ihany koa izahay.
GV: Inona no mety ho vokatry ny vinavinan'asa virtoalinao - raha toa ka tsy tanteraka ireo – amin'ny fampandrosoana ity asa famoriana (anthology / antolojia) ity?
CR: Tsy misy ny fifandraisana mivantana eo amin'ny bilaogy sy ny antolojia, samy mahaleotena avy izy roa. Ny antolojia dia teraka noho ny filàna bokim-pianarana ho an'ireo fampianarana nataoko tao amin'ny Ivontoeram-Pampianarana Amerikana hatramin'ny 2006. Satria ampahany kely fotsiny ihany amin'ny antolojian'ny boky no niresaka momba ny lohahevitry ny fampianaranay (afa tsy ireo sasany toy ny “Latinos en Nueva York: Fiarahamonina ao anaty tetezamita;” natontan'Gabriel Haslip-Viera sy Sherrie L. Baver, ary “Mambo Montage: Latinizasionan'i New York” an'i Agustín Laó-Montes sy Arlene M. Dávila), nanapa-kevitra izahay ny hamorona ity “mpamaky” ity izay mahafoaka ny vaovao ara-potoana momba ny lohahevitra. Manantena izahay fa ny famoahanay dia mameno ireo lahatsoratra nambara tany aloha.
Video voalohany ho fampahafantarana ny angona “Hispanika ao New York: Boky loharano” :